शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा छैटौँ कलेजो प्रत्यारोपण - Health Today Nepal
April 4th, 2021 समाचार0comments
काठमाडौं, २२ चैत : भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ा छैटौँ कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । केन्द्रले शनिबार भक्तपुरका स्थानीय ४४ बर्षका पुरुषको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको हो । उनलाई आफ्नै २५ बर्षीया छोरीले कलेजो दान गरेकी हुन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमराज ज्ञवालीले छैटौ पटक केन्द्रले सफलताका साथ कलेजो प्रत्यारोपण गरेको जानकारी दिए ।
कजेजो प्रत्यारोपणमा भारतस्थित म्याक्स अस्पतालको विज्ञ टोलीले सघाएको केन्द्रले जनाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म १२ वटा कलेजो प्रत्यारोपण भएका छन । ती सबैमा कुनै न कुनै देशका विज्ञहरुले सघाउदै आएका छन् । प्रत्यारोपणमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्ञवाली सहित कलेजो रोग विज्ञ डा. छेतेन योञ्जन, डा. अनिसा तिवारी, डा. ललित दास, एनेस्थेरिसियामा डा. आरती राई, डा. शुसिल तामाङ तथा नर्सहरु बिनिता उप्रेती र अनिता सहभागी भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कोरोना महामारी पछि नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण भएको यो पहिलो हो । नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण पनि सोही केन्द्रमा भएको थियो । केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका प्रत्यारोपण सर्जन डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वको टीमले २२ मंसिर २०७३ का दिन पहिलो प्रत्यारोपण गरेको थियो ।
Previous article हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि नखाइदिँदा समस्या
Next article अब ७५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम